Public Health in Myanmar: အသက် ၁၈ နှစ်ပြည့်မှ ဖတ်ပါ (၅)
ကျေးဇူးပါဆရာ။ သိပ်လောဘကြီးတဲ့ သူငယ်ချင်းတွေကို လက်ဆင့်ကမ်းလိုက်ပါ့မယ်။
Thanks for your articles including this one. Please write about the pros and cons of circumcision.
ဆရာခင်ဗျာ..လိမ်တန်မှာ. အငုံအနေနဲ. ဒီအတိုင်းပဲ နေရင်.နောက်ပိုင်း ကျရင်. ဘယ်လို.. ဆိုကိုးတွေ ရှိလာနိုင်မလဲ ဆိုတာ သိချင်ပါတယ်ခင်ဗျ. အခုချိန်မှ. ခွဲစိတ်ကုသ ရမှာ လည်းေုကာက်နေလို.ပါ..ူပီးတော့ ဒီအတိုင်းပဲ နေရင်.. ဘယ်လို.နေထိုင်ရမယ်ဆိုတာ ဘယ်လို သန့်ရှင်းရေး လုပ်ရမယ်..ဆိုတာလေး..ကို လည်း ပြောပြပေးစေချင်ပါတယ် ခင်ဗျ.. ကျေးဇူးတင်ပါတယ်.
Circumcision အကြောင်းရေးပါမယ်။ အခု Infertility ကလေးမရနိုင်ခြင်း အကြောင်း ရေးနေပါတယ်။ အမေးရှိမှလဲ ရေးဖြစ်လို့ မေးတဲ့သူတွေကို ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။
ကျွန်တော် သူငယ်ချင်း တယေက် က boy ပုံ တွေ ကြည့် နေတာ သူံ ကို gay လို့ ပြော လို့ ရလား
ဘယ်လို လုပ်သင့် သလဲ
ယောကျာင်္း စစ် စစ် ဖြစ် အောင် လုပ် လို့ ရလား
နည်းလမ်းလေး ပြော ကျေူးဇူး ပြု ပြီး ပြော ပြပေးပါလား
ကိုယ်ဝန် ရှိတာ သိနိုင်တဲ့နည်းတွေ -
(၁) ရာသီ မလာတော့ခြင်း၊
(၂) Morning sickness ကိုယ်ဝန်ဆောင်စ လက္ခဏာတွေ ရှိလာတာ သိရတယ်။ ကိုယ်ဝန်ဆောင် ၇ဝ-၈၅% ဖြစ်တတ်။ ပျို့-အန်ခြင်း၊ ရင်သားနာခြင်း၊ အစာအိမ် ပြဿနာပေးခြင်း၊ အားယုတ်ခြင်း၊ မကြာခဏ ဆီးသွားခြင်း၊ မောပမ်းခြင်း၊ သွေး အနည်းငယ် ဆင်းခြင်း၊ ယခင်ကထက် အားအင်ပြည့်၊ အလေးချိန် တိုးလာမည်။ အနေအထိုင် ခက်ခဲလာမည်။ အရေပြား ပြောင်းလဲမှုများ ရှိမည်၊ သွင်ပြင် လက္ခဏာများ နှင့် စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာလည်း ပြောင်းလာသည်။
(၃) Urine for pregnancy test ကိုယ်တိုင်လုပ်နိုင်တယ်။ ဆေးဆိုင်တွေမှာ အလွယ် ၀ယ်ရတယ်။
(၄) ဆရာဝန်က အပေါ်ယံနဲ့ အတွင်းပိုင်း စမ်းသပ်စစ်ဆေးခြင်း၊
(၅) Ultrasound ရိုက်စစ်ဆေးခြင်း၊
ဆရာခင်ဗျာ ကျွန်တော့်အသက်က၂၅ပါ အိမ်ထောက်ကျတာလပိုင်းပဲရှိပါသေးတယ်ကျွန်တော်က circumcision မလုပ်ဖြစ်သေးတဲ့ပန်းအဖျားငုံနေသူတယောက်ပါခင်ဗျာ အဲဒါကအိမ်ထောက်ဖက်အမျိုးသမီးထံဘယ်လိုဆိုးကျိုတွေဖြစ်စေနိူင်သလဲသိချင်ပါတယ်ဆရာ ကန်တော့ပါဆရာဆက်ဆံပြီး၎ရက်၅ရက်လောက်ကြာတော့အဖြူဆင်နေတယ်ပြောလို့ပါအနံ့လည်းဆိုတယ်တဲ့ သွေးပုတ်ဆင်းသလိုတွေဆင်းနေလို့ပါ စိတ်ပူလို့ပါဆရာဆရာဝန်နဲ့လည်းချိန်းထားပြီးပါပြီဒါမယ့်ကျွန်တော်သိချင်လို့ပါဆရာစိတ်ပူနေရလို့circumcisionလုပ်ပါတော့မယ်ဆရာ ကျေးဇူးပြုပြီးဖြေဆိုပေးစေလိုပါတယ်ခင်ဗျာ
sithu zaw said...